Ngena ngemvume ku-akhawunti ye-Outlook | Outlook Ngemvume - Isinyathelo by Isinyathelo Inqubo
Ngemva ukudala i-akhawunti yakho ye-Outlook, ukusebenzisa lokhu okuthunyelwe ukuqedela Outlook inqubo Ngemvume. Futhi uma ungazange wadala akhawunti yakho ye-Outlook kodwa ke kuqala ukudala i-akhawunti yakho ngokuchofoza okuthi lapha. Lesi sihloko engimdalele nge Ngokwazi kwami ​​okuyinto kukusiza ukuba kalula Ngena ngemvume ku-akhawunti ye-Outlook.
Une ukufunda lesi sihloko ngokucophelela ukuqedela Outlook Ngemvume inqubo. Landela izinyathelo okukhulunywa ngazo isinyathelo ngesinyathelo inqubo bese uqedela ngokuphumelelayo kuzoholela nawe ozifaka ku-akhawunti yakho ye-Outlook. Lokhu okuthunyelwe sihlanganisa olusemthethweni website isixhumanisi ukungena ikhasi lokungena ngemvume ngqo.
Lapha uthola ulwazi lwangempela futhi okuqondile mayelana Kanjani ukuze ungene ku-akhawunti ye-Outlook. Kunezinto ezimbili eziyinhloko luyadingeka ukuze uqedele le nqubo sokungena ngemvume yakho Igama lomsebenzisi futhi Iphasiwedi lapho uthola khona uma udala i-Akhawunti yakho ye-Outlook.
Outlook Ngemvume Process | Isinyathelo by Isinyathelo Complete Guide
Landela ngezansi Ukukhuluma isinyathelo ephelele ngesinyathelo inqubo ngemvume ku-akhawunti ye-Outlook. Qedela inqubo ngempumelelo.
Okokuqala, uchofoze isixhumanisi inikezwe ukungena olusemthethweni Outlook Ikhasi Lokungena Ngemvume: www.outlook.com
Manje, oyifakile esemthethweni Outlook iwebhusayithi. Chofoza phezu “Ngena ngemvume” inkinobho.
Ngemva kwalokho ufaka imeyili, ifoni, noma i-Skype esikhaleni esinikeziwe ngokucophelela bese ucindezela “Olandelayo”.
Manje, kufanele ufake iphasiwedi yakho esikhaleni esinikeziwe bese ucindezela “Ngena ngemvume”.
Uyoba ngempumelelo faka ku-akhawunti yakho ye-Outlook.
Manje, ungakwazi ukufinyelela zonke izici ezahlukene olunikezwa Outlook.
Lesi yisihloko engcono uthola mayelana Outlook inqubo Ngemvume. Bheka, ngizuze wonke Outlook Ngena ngemvume Process ngakho elula usebenzisa igxathu negxathu format. Vele ulandele izinyathelo bese uqedela inqubo, usebenzise isixhumanisi ukungena ikhasi olusemthethweni ngqo.
Aba impendulo yakho mayelana nalokhu okuthunyelwe ngisho uma kukhona umbuzo noma ubuze lona usebenzisa ngezansi Ukukhuluma amazwana ebhokisini. Futhi uthole update njalo website yethu esemthethweni www-hotmail-com.email.
Filed Under: Ngena ngemvume Tagged With: Indlela ngemvume akhawunti sinesimo sengqondo, Outlook inqubo yokungena ngemvume, Outlook Ngena ngemvume